Yohane 19 NA-TWI - Pilato ma wɔbɔɔ Yesu mmaa. Asraafo - Bible Gateway
Yohane 18Yohane 20
Yohane 19 Nkwa Asem (NA-TWI)
19 Pilato ma wɔbɔɔ Yesu mmaa. 2 Asraafo no de nsɔe nwenee ahenkyɛw de hyɛɛ Yesu; afei wɔde atade kɔkɔɔ nso hyɛɛ no. 3 Wodii ne ho fɛw, bobɔɔ no asotɔre, kae se, “Yudafo hene, wo nkwa so!”